राजेन्द्र पराजुली - कान्तिपुर समाचार
क्षयोन्मुख उदारवाद !
‘उदारवादको अब कुनै काम छैन,’ रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाइ हो यो । ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ सँगको कुराकानीमा उनले हालै गरेको यस्तो टिप्पणीले संसारभर गम्भीर तरङ्ग ल्याइदिएको छ । राजनीतिशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिकर्मी र यसमा रुचि राख्ने मानिस पुटिनको विचारका पक्ष–विपक्षमा तर्क गर्न थालेका छन् ।
कोटेश्वर चोकमा एक घण्टामा कतिवटा सवारीसाधन आवतजावत गर्लान् ? अहिले यो प्रश्न मात्रै छ मसँग, जसको उत्तर छैन  । एउटा समय यस्तो पनि थियो, जुन समयमा मसँग यो प्रश्नको जवाफ हुन्थ्यो  ।
जति गर्दा पनि चन्द्रशेखरले निर्वाचन जितेन । जब उसले मोबाइल फाल्यो, रक्सी पियो र ओछ्यानमा ढल्यो, उसलाई भाउन्न हुन थाल्यो । घर फनफनी घुमेजस्तो हुन थाल्यो । टाउको टन्कन थाल्यो उसको । उसलाई पत्यारै लागेन, आफ्नो पराजय !
श्राद्ध गर्दैगर्दा एउटा प्रसंग आउँछ, त्यसबेला पुरेतले पिताजीलाई सम्झन आदेश दिन्छन् । ‘ल आँखा चिम्लेर पिताजीको अनुहार सम्झेर उठ्,’ पुरेत भन्छन् । त्यसबखत म आफूलाई थाम्न सक्दिनँ । मभित्र एउटा अनुत्तरित प्रश्न उत्पन्न हुन थाल्छ, देख्नै नपाएको पिताजीलाई मैले कसरी सम्झनु ?
जोडजोडले साइकलको पाउदानी घुमाइरहेको किसनले गोडाको रफ्तार कम गर्‍यो । सडकको बीचमा फालिएको गाडीको बम्पट र त्यसमा लेखिएको उक्त हरफ बिस्तारै पढ्यो उसले । साइकल पछिल्तिर क्यारिजमा बसिरहेकी फातिमालाई पनि उसले इसारा गर्दै ओर्लन भन्यो ।
राजेन्द्र पराजुलीका लेखहरु :
सामाजिक–राजनीतिक दुनियाँपाइला राख्ने ठाउँ पनि नभएको बस रोक्नका लागि एक जना अर्धबैँसेले हात दिए । बाह्रबिसेबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको उक्त बस रोकिएन । मान्छे राख्ने ठाउँ भैदिएको भए अवश्य रोकिने थियो । ढोकासम्मै यात्रु झुन्डिएका थिए ।
जंक बुक !
कागजमा छापिएर आउने सबै पुस्तकाकार थोक साहित्य हुन् ? कि वाङ्मय मात्रै ? वाङ्मय र साहित्यबीचको फरक रेखा कहाँ र कसरी कोरिएको छ ? आधुनिक बजारशास्त्रमा यो रेखाको कुनै अर्थ छ कि छैन ?